Fotoam-pifaliana tany Bibbiena, Arezzo.
Isaorana manokana ry Mompera Alphonse sy Pascal nanao ny lamesa ny alahady 18 febroary 2018, ny MDMK nanentana ny litorjia, Atoa Hervé mpitendry nanafana ny hira tamin’ny zava-maneno. Ny aumônier moa...Read more
Fiatahana masina eny Pietravolta (MO) amin'ny volana jiona
Hisy fiatahana masina (laretirety) karakaraina ho an'ny Malagasy rehetra manerana an'i Italie, na Pretra na relijiozy na lahika, eny Pietravolta (Modena), ny 11 ka hatramin'ny 20 jiona ho avy izao...Read more
Nihaona manokana tamin'ny Ray Masina ireo evekantsika.
Tamin'ny zoma 2 febroary 2018 no nihaona manokana tamin'i Papa François ireo evekantsika 3 mirahalahy : - Mgr. Désiré Tsarahazana, arsevekan'i Toamasina, Filohan'ny Fiombonamben'ny Eveka any...Read more
Fiaraha-nisakafo tamin'ireo eveka nandalo teto Roma.
Nifanindry tamin'iny rodobe nifampiarahabana taom-baovao tany Naples iny moa ny fotoana nahafahan'ireo eveka niaraka niombom-bavaka tamin'ny Ankohonana ka dia voatery nizara roa isika. Nahafinaritra...Read more
Fifampiarahabana taom-baovao 2018 tany Naples
Isaorana an’Andriamanitra fa tontosa soa aman-tsara ny fihaonan’ny Malagasy tany Napoli. Ankasitrahana manokana isika rehetra indrindra ireo nandray anjara mavitrika nahatontosana izany. Singanina...Read more
Fiombonam-bavaka tamin'i Hervé Donatien izay namoy ny rainy.
Ny alahady 7 janoary, nankalazana ny Epifania, Fisehoan’ny Tompo amin’ny firenen-drehetra, no niarahana nanolotra ihany koa ny Sorona Masina ho fialan-tsasatry ny fanahin’i Tompokolahy...Read more
Fametrahana ny aumônier tamin'ny fomba ofisialy.
Nisy fiovana tamin'ny fotoana farany moa ny fandaharam-potoana ka ny alahady 5 novambra teo vao tanteraka ny fametrahana ny aumônier tamin'ny fomba ofisialy ary notohizana hatrany ho anatin'ny...Read more
Alahady 29 oktobra : fetin'ny Ankohonana sady hametrahana ny aumônier vaovao amin'ny andraikiny.
Maromaro ny vaovaom-piangonana efa natsidiky ny aumônier vaovao any amin'ny seraserantsika any fa ity no tena tsy faralahin-javatra fa « vody hena hoe tsa minga aloha » : ny alahady 29 oktobra ho avy...Read more
Voady voalohany nataon'izy 9 mirahavavy ao amin'ny fikambanana vokasionista any Naples.
Isaorana lehibe Andriamanitra fa vita soa aman-tsara tamin'ny alatsinainy 2 oktobra teo ny Voady Voalohany nataon'ireo zandry/zanantsika vokasionista 9 mirahavavy tao Pianura, Naples. Mankasitraka...Read more
Akon'ny fankalazana ny 50 taona nahatongavan'ny misionera redamptorista tany Madagasikara.
Isaorana an'Andriamanitra ny faha-50 taona nahatongavan'ny Misionera Redamptorista (CssR) tany Madagasikara. Tao Pagani (Salerno) no natao ny fankalazana. Nanomboka tamin’ny 4 ora sy sasany...Read more